भेरी नगरपालिमा अख्तियारी भन्दा निकासा कम — Digital News
आज : २०७७ कार्तिक १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
डिजिटल संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७७/६/२३ गते
आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ का लागि भेरी नगरपालिकाले बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा अख्तियारी भन्दा ३ करोड ७८ लाख ५४ हजार २ सय ४९ रुपैया कम निकासा पाएको थियो । नगर प्रमुख चन्द्रप्रकास घर्तीले दिएको जानकारी अनुसार आव २०७६–०७७ मा नगरपालिकाले ५८ करोड ३७ लाख ६१ हजार ५ सय १५ रुपैयाको अख्तियारी प्राप्त गरेको थियो भने, ५४ करोड ५९ लाख ७ हजार २ सय ६५ रुपैयाको निकासा प्राप्त गरेको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ को असार मसान्तसम्म नगरपालिकाको संचित कोषमा ५४ करोड ५९ लाख ७ हजार २ सय ६५ रुपैया जम्मा भएको थियो भने, ४८ करोड ४१ लाख ७ हजार १ सय ६ रुपैया खर्च भएर ६ करोड १८ लाख १ सय ५८ रुपैमा संचित कोषमा बाँकी रहेको नगर प्रमुख घर्तीले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट १० करोड ३ लाखको अख्तियारी प्राप्त भएतापनि ६ करोड ८१ लाख ७८ हजार ७ सय ५० रुपैयाको निकासा प्राप्त भएको थियो भने, ३ करोड २१ लाख १२ हजार २ सय ४९ रुपैया निकासा हुन सकेको थिएन । संघीय सशर्त अनुदान तर्फ २५ करोड २१ लाख ८५ हजारको अख्तियारी प्राप्त भएतापनि २४ करोड ७६ लाख ३६ हजारको निकासा प्राप्त भएको थियो भने, ४५ लाख ४९ हजारको निकासा हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँड तर्फ ११ लाख ९३ हजारको अख्तियारी प्राप्त भएतापनि उक्त रकम निकासा हुन सकेको थिएन । आन्तरिक राजश्व तर्फ १ करोड २५ लाख अख्तियारी प्राप्त गरेको नगरपालिकाले ९८ लाख ८१ हजार ७ सय ९८ रुपैयाको निकासा प्राप्त गरेको थियो भने, २६ लाख १८ हजार २ सय २ रुपैया निकासा गर्न सकेको थिएन ।
संघीय सरकारको वित्तिय समानिकरण अनुदान, संघीय सरकारको सशर्त अनुदान, संघीय सरकारको समपुरक अनुदान, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँड अनुदान, प्रदेश सरकारको वित्तिय समानिकरण अनुदान, संघीय सरकारको बिशेष अनुदान र गतबर्षको अल्या सहितको रकम गरेर नरपालिकाको संचित कोषमा जम्मा भएको ५४ करोड ५९ लाख ७ हजार २ सय ६५ रुपैया मध्ये ४८ करोड ४१ लाख ७ हजार १ सय ६ रुपैया खर्च भएर ६ करोड १८ लाख १ सय ५८ रुपैया संचित कोषमा बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण कार्यक्रम चालु र पुँजीगत, पर्यटन पूर्वाधार विकास योजना, समाज कल्याण कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको चालु अनुदान (सशर्त, विशेष र समपुरक), पदेश सरकारको पूँजीगत अनदान, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट नगरपालिकालाई प्राप्त भई कोलेनिकाबाट भुक्तानी भएको जम्मा रकम १५ करोड ७६ लाख ५७ हजार ५ सय ८० रुपैयामध्ये ११ करोड ८३ लाख २९ हजार ३ सय ६० खर्च भएको छ भने, ४ करोड ६ लाख ६६ हजार २ सय २० रुपैया फिर्ता भएको छ । १ करोड २५ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले आव २०७६–०७७ मा ९८ लाख ८१ हजार ७ सय ९७ रुपैया राजश्व संकलन गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
१२ लाख २ हजार असुल गर्नुपर्ने, २९ लाख ३९ हजार कागतजात पेश गर्नुपर्ने, ४६ लाख २६ हजार नियमित गर्नुपर्ने र ७ लाख ८ हजार पेश्की बेरुजु गरि जम्मा बेरुजु ९४ लाख ८५ हजार रहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
भौतिक पुर्वाधार तर्फ
नगरपालिकाले छनौट गरेका १ सय २३ वटा आयोजनाहरुमा १ सय १६ सम्पन्न गरेको छ भने, ७ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । जसमा नगरपालिकाले भौतिक प्रगति ७७ दशमलब ६० प्रतिशत हासिल गरेको छ । कर्णाली प्रदेश पूर्बाधार बिशेष कार्यक्रम तर्फ छनौट गरिएका ६ वटा आयोजना मध्ये २ वटा सम्पन्न भएका छन् भने, ४ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य भईरहेको छ । जसमा नगरपालिकाले भौतिक प्रगति ५३ दशमलब ३० प्रतिशत हासिल गरेको छ । स्थानिय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम तर्फ छनौट गरिएका ९ वटा आयोजनाहरु मध्ये ७ वटा सम्पन्न भएका छन् भने, २ वटा आयोजनाको काम भई रहेको छ । जसमा नगरपालिकाले भौतिक प्रगति ७३ दशमलब ६६ प्रतिशत हासिल गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको सशर्त अनुदान तर्फका ३ वटा आयोजना मध्ये २ वटा सम्पन्न भएका छन भने, १ आयोजनाको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । जसमा नगरपालिकाले भौतिक प्रगति ८६ दशमलब १० प्रतिशत हासिल गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको बिशेष अनुदान तर्फको १ आयोजनाको निर्माण कार्य भईरहेको छ । जसमा नगरपालिकाले भौतिक प्रगति २७ दशमलब ४३ प्रतिशत हासिल गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको समपुरक अनुदान तर्फका २ वटै आयोजनाको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । जसमा नगरपालिकाले भौतिक प्रगति ६३ दशमलब २७ प्रतिशत हासिल गरेको छ । संघिय सरकारको समपुरक अनुदान तर्फको १ आयोजनाको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । जसमा नगरपालिकाले भौतिक प्रगति ९७ दशमलब ८० प्रतिशत हासिल गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सशर्त अनुदान तर्फका ७ वटै आयोजनाहरुको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । जसमा नगरपालिकाले भौतिक प्रगति ६७ दशमलब ४७ प्रतिशत हासिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फका ९ वटै आयोजना सम्पन्न भएका छन् । जसमा नगरपालिकाले भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत हासिल गरेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फका २ वटा आयोजना मध्ये १ सम्पन्न भएको छ भने, १ को निर्माण कार्य जारी रहेको छ । जसमा नगरपालिकाले भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत हासिल गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश पूर्बाधार बिशेष कार्यक्रम अन्तरगत
५० लाखको डिङ्गा बडालेख सडकमा १९ लाख ९४ हजार खर्च गरेर नगरपालिकाले साढी ३ किलो मिटर सडकको ट्रयाक खोलेको छ । त्यसैगरी वडा नम्बर २ को जनता प्राविको २० लाखमा नगरपालिकाले २ सय ८४ मिटर घेराबार लगाएको छ । वडा नम्बर ४ को शान्तिचौतारा खहरेखोला बसपार्क निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेर २० लाख फिर्ता भएको छ । वडा नं ७ को सरस्वती मावि पुन्माको २० लाखको भवन निर्माणको काम भईरहेको छ । वडा नं १ शिव व्यवसायी मावि कालेगाउँको २० लाखको भवन निर्माणको काम भईरहेको छ । २० लाखको मैदे बडालेख सडकको काम १२ लाख ११ हजारमा सम्पन्न भई ७ लाख ८९ हजार फिर्ता भएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार साँझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत
वडा नं ५ को काफलचौरमा ५० लाखको जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माण कार्य भईरहेको छ । वडा नं ४ को हिमालय होटलदेखि नेपाल बैंक लिमिटेडसम्म (५६.६ मिटर) को आरसिसी पैदल मार्ग १० लाखमा सम्पन्न भएको छ । वडा नं ४ कै पुरानो मालपोत कार्यालयदेखि काजीबारा जाने (१० मिटर आससिसी ढलान र ६९ मिटर मेशिनरी वाल) सडक १० लाखमा सम्पन्न भएको छ । वडा नं ८ को झालहाल्न काफलचौर जोड्ने १० लाखमा नगरपालिकाको थप बजेटमा ३ किलोमिटर ४ सय ५० मिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । वडा नं ५ को सति पातिहाल्ना सडक १० लाखमा १ किलोमिटर ५ सय ३० मिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । वडा नं ११ को शिवशंकर मावि जगतिपुरमा १० लाख २८ हजारमा ९२ मिटर ७५ सेन्टीमिटर लम्बाई मेसनरी वाल सहितको घेराबारको काम सम्पन्न भएको छ । वडा नं. ४ को बोहरामा १० लाखमा ३ सय ९१ मिटर आरसिसी सिंचाई कुलो निर्माण भएको छ । वडा नं ३ को कालेगाउँ पिपलबोट देखि कोटखोला सडक ४ लाख १८ हजारमा ८ सय मिटर सडक स्तर उन्नती र ४ सय मिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । वडा नं १ को कोलचौर रिठापानी डौरीकाडा सडक १० लाखमा साढी १ किलो मिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान अन्तरगत
वडा नं ६ को लक्ष्मी मावि भेरे १७ लाख ३० हजारमा भवन निर्माणको काम भईरहेको छ । वडा नं ५ को निगालेनि देखि पुरानोगाउँ छिप्रेना खानेपानी २१ लाख २५ हजारमा ६ हजार ५ मिटर पाईप लाइन, एक ईन्टेक, एक आरभिटी, ६ वटा धारा निर्माण गरी खानेपानी संचालनमा आएको छ । वडा नं १२ को रावतगाउँमा २० लाखमा सोलर लिप्ट प्रविधिबाट ७ हजार ७० मिटर पाईप लाईन एक ईन्टेक, एक आरभिटी निर्माण गरी खानेपानी संचालनमा आएको छ ।
प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान अन्तरगत
वडा नं. ९ को स्वास्थ्य चौकीमा १० लाख ९७ हजारमा बर्थिङ्ग सेन्टर भवन निर्माणको काम भईरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत
वडा नं ४ मा प्रदेश र नगरपालिकाको ८४ लाख ४७ हजार ८ सय ११ रुपैयामा जाजरकोट खलंगा सह–लगानी खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ । वडा नं. १३ को कुदुमा ५ लाख २० हजार ७ सय ७१ रुपैयाको काम सम्पन्न भएको छ ।
वित्तिय प्रगति तर्फ
छनौट गरिएका १ सय २३ वटा आयोजनाहरु मध्ये काम सम्पन्न भएका १ सय १६ वटा आयोजनाको बित्तिय प्रगति ७७ दशमलब ६० प्रतिशत रहेको छ । जसमा छनौट गरिएका २१ वटा खानेपानी आयोजनामा १८ वटा सम्पन्न भएका छन् भने, ३ वटा बाँकी रहेका छन् । जसको वित्तिय प्रगति ६९ दशमलब ९४ प्रतिशत रहेको छ । छनौट गरिएका ३३ वटा सडक आयोजनाहरु मध्ये ३३ वटै सम्पन्न भएका छन् । जसको बित्तिय प्रगति ८९ दशमलब ५३ प्रतिशत रहेको छ । छनौट गरिएका १० वटा सिंचाई आयोजना मध्ये ९ वटा सम्पन्न भएका छन् भने, १ वटा बाँकी रहेको छ । जसको बित्तिय प्रगति ९३ दशमलब ४१ प्रतिशत रहेको छ । छनौट गरिएका २७ वटा भवनहरु मध्ये २७ वटै भवनको काम सम्पन्न भएको छ । जसको बित्तिय प्रगति ६४ दशमलब ४० प्रतिशत रहेको छ । छनौट गरिएका १ वटा पुलको काम सम्पन्न भएको छ । जसको बित्तिय प्रगति ९१ दशमलब ८० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी छनौट गरिएका अन्य ३१ वटा आयोजनाहरु मध्ये २८ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने, ३ वटा आयोजनाको काम बाँकी रहेको छ । जसको बित्तिय प्रगति ८३ दशमलब २९ प्रतिशत रहेको छ ।
आयोजना क्षेत्रगत वित्तिय प्रगति तर्फको जम्मा १० करोड ५० लाख ८ सय बजेट मध्ये भेरी नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा ८ करोड १४ लाख ८५ हजार १ सय ६९ रुपैया खर्च गरेर जम्मा ७७ दशमलब ६० प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ ।
भौतिक प्रगति तर्फ
भौतिक प्रगतिको सडक तर्फ भेरी नगरपालिकाले १८ दशमलब ९४ किलोमिटर माटे÷कच्ची सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने, १८ दशमलब ९४ किलोमिटर माटे÷कच्ची सडक मर्मत गरेर सय प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । ३६ दशमलब ९३ किलोमिटर माटे÷कच्ची सडक नयाँ ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले ३१ दशमलब ९२ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलेर ८५ दशमलब ३५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । ० दशमलब ३८ किलोमिटर आरसिसी सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले ० दशमलब ३८ किलोमिटर आरसिसी सडक निर्माण गरेर ९९ दशमलब ६४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । त्यसैगरी २१ वटा खानेपानी आयोजना मध्ये १८ वटा आयोजना सम्पन्न गरेर ८५ दशमलब ७१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । सिंचाई तर्फ ० दशमलब १५१ किलोमिटर पक्की नहर कुलो निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले ० दशमलब १५ किलोमिटर निर्माण गरेर ९९ दशमलब ३३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । ५ दशमलब २० किलोमिटर पाईप लाईन सिंचाई निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले ५ दशमलब २० किलोमिटर पाईप लाईन सिंचाई निर्माण गरेर सय प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । एक वटा पोखरी सिंचाई निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले पोखरी सिंचाई निर्माण गरेर सय प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । सडक पुल तर्फ १ वटा सल्याब बृज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले लक्ष्य पुरा गरेर सय प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन तर्फ ६९ मिटर ढल निकास गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले ६२ दशमलब २ मिटर ढलनिकास गरेर ९८ दशमलब ४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । आबास तथा भवन तर्फ १४ वटा विद्यालय भवन तथा शौचालय निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले ७ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको र ७ वटाको निर्माण कार्यलाई जारी राखेर ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । १ वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले भवन निर्माणको काम सुरु गरी ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । १ वटा बर्थिङ्ग सेन्टर भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले बर्थिङ्ग सेन्टर भवन निर्माणको काम सुरु गरी २० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । त्यसैगरी ७ वटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले ७ वटै भवनको काम सुरु गरी ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट निकासा भएको ७५ लाखको ९ वटा आयोजना छनौट गरी ९ वटै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी नगरपालिकाले ९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको थियो । नगरपालिकामा सुचीकृत भएका २५ सय बेरोजगार मध्येबाट ३ सय ३६ जनाले रोजगारी पाएका थिए । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट वडा नं १ को पिपे मैदे वडालेख सडकको ५ किलोमिटर कच्ची सडकको स्तर उन्नती गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । ३ सय ८४ जनाले १० दिनको रोजगारी पाएका थिए भने, ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा तर्फ
निशर्त अनुदान तर्फ विनियोजित ५० लाख ९२ हजार मध्ये ४६ लाख ३६ हजार ५ सय ३८ रुपैया खर्च गरि ६७ दशमलब ८१ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल भएको छ । निसशर्त अनुदान तर्फको कुल बजेट ४ करोड १० लाख ९४ हजार मध्ये ३ करोड ७१ लाख ३९ हजार ४ सय १३ रुपैया खर्च गरि ९० प्रतिशत बित्तिय प्रगति हासिल भएको छ ।
कोरोना नियन्त्रण तर्फ
कोभिड–१९ को संक्रमन रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहत वितरणमा नगरपालिकाले १ करोड ४४ लाख ८७ हजार ६ सय ९८ रुपैया खर्च गरेको छ । उक्त खर्च शिर्षकमा मास्क, सेनिटाईजर, आरडिटी, पिसिआर किट खरिद, पिपिई सेट खरिद, क्वारेन्टाईनको सामान खरिद तथा व्यवस्थापन, कोरोना प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण, गर्भवती महिलालाई भिडियो एक्सरे, विपन्न परिवारलाई राहत वितरण जस्ता उपशिर्षक रहेका छन् । नगरपालिकाको ६ स्थानमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाईनमा ९ सय ५४ जनालाई राखेर घर पठाईएको छ । ६ जनालाई आईशोलेसनमा राखेर पूर्णरुपमा स्वस्थ भएपछि घर फर्काएको छ । ५ सय ३२ जनाको आरडिटी र २ हजार २ सय ९ जनाको पिसिआर परिक्षण गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा तर्फ
“क” वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र पाउने १०८, “ख” वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र पाउने ५४, ७० बर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक १२ सय ६४, दलित जेष्ठ नागरिक ४ सय ४५, एकल जेष्ठ महिला ३०६, विधवा महिला ४४७, दलित बाल पोषण १९ सय १३, अन्य बाल पोषण २८ सय ४ र लोप उन्मुख जनजाति २ गरी जम्मा ७ हजार ३ सय ४३ जना रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा तर्फ निकासा भएको ८ करोड ४५ लाख १९ हजार मध्ये ८ करोड ४४ लाख ९ हजार ५ सय ६० रुपैया खर्च भएको थियो भने, १ लाख ९ हजार ४ सय ४० रुपैया बाँकी रहेको थियो ।
मावि, आधारभुत, प्रावि, बाल विकास केन्द्र र सामुदायिक सिकाई केन्द्र गरी जम्मा १ सय १ वटा विद्यालय रहेको नगरपालिकामा २ सय ९३ शिक्षक, ६४ जना कर्मचारी र १० हजार ८ सय ७७ जना बिद्यार्थी रहेका थिए । शिक्षा तर्फ १९ करोड १९ लाख २१ हजार सशर्त अनुदान मध्ये १६ करोड ७७ लाख ३२ हजार ८ सय २१ रुपैया खर्च गरेर ८२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल भएको छ ।
नगरपालिकाले “बालबालिकासंग मेयर र बृहत खेलकुद कार्यक्रम”, “महिलासंग उपमेयर कार्यक्रम” र “जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग कार्यक्रम” लाई संचालन गर्दै आएको छ । जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त नगरपालिका घोषणा अभियानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
न्यायिक समिति तर्फ
नगर न्यायिक समितिमा आव २०७६÷०७७ मा ११ वटा समान्य, ३ वटा पालनपोषण, २ वटा सम्बन्ध विच्छेद, २ वटा ज्यालामजदुरी, १ पानी मुहानगरी जम्मा १९ वटा मुद्धा दर्ताका थिए भने, १० वटा मुद्धा किनारा लागेका छन् भने, ९ वटा मुद्धा विचाराधिन रहेका छन् । ज्याला मुजदुरीको मुद्धा फैसला गरिएको थियो भने, मेलमिलाप हुन नसकेपछि गालीवेजतिको एउटा मुद्धा नगर न्यायिक समितिले अदालतमा पठाएको थियो ।
वडा नं ५ को काफलचौरमा जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना भई संचालनमा आएको, नगरपालिकाका ७ वटा वडामा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा संचालन भएको, नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, नगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाईल, स्वास्थ्य डिजिटल प्रोफाइल तयार भएको, स्वास्थ्य चौकीबाट डिएचआईएस–२ रिर्पोटिङ्गको सुरुवात, १३ वटै वडामा ग्रामिण भिडियो एक्सरे कार्यक्रम संचालन भएको, वडा नं १२ को रावतगाउँमा सोलार पम्पिङ्ग प्रविधिबाट खानेपानी योजना सम्पन्न भएको, स्वास्थ्य चौकी कुदु र पुन्ममा ल्याब सेवा संचालन भएको, ८ वटा प्रावि, २१ वटा निमावि र ९ वटा माविगरी जम्मा ३८ वटा शिक्षक दरबन्दी थप गरिएको, मानसिक स्वास्थ्य शिवीर संचालन गरि ९१ जनालाई सेवा दिएको, शिक्षक कर्मचारीको तलब बैंक खातामा भुक्तानी दिने गरिएको, २ वटा बिद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र २ वटा विद्यालयमा आईसिटी ल्याब स्थापना, राजश्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, सबै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना, सरसफाईका लागि Suction Vehicle खरिद प्रक्रिया अन्मि चरणमा पुगेको, एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको, वडा नं १ को डौरीकाँडा, वडा नं २ को तिमिले, पुरानो रिसाङ र वडा नं ७ को रुपकोट मिथेन्ग्रा बाहेक १३ वटै वडाका सबै बस्तीमा कच्ची सडक सञ्जाल बिस्तार भएको, बीऊ उत्पादन, तरकारी उत्पादन र खाद्यन्न बाली उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी वडा नं १ को कालेगाउँमा ३० क्वीन्टल गहुँको बीऊ, वडा नं ७ को रुपकोटमा ५० क्वीन्टल मकैंको बीऊ, वडा नं ६ को भेरेमा १५ क्वीन्टल आलुको बीऊ र वडा नं २ को तिलिंगेमा २ क्वीन्टल सिमीको बीऊ उत्पादन र अन्तिम चरणमा रहेको जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त नगरपालिका घोषणा अभियानलाई नगरपालिकाले आव २०७६÷०७७ मा गरिका कामहरुको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।
भीरबाट लडेर छेडागाडमा एक बालिकाको मृत्यु